Ndụmọdụ na ịdọ aka na ntị gbasara ogige ezumike 🏕️ - Ne gerekir?
Ntụnye na ịdọ aka na ntị banyere ogige oge ezumike 🏕️
Kedu ihe ndị achọrọ maka ogige oge ọkọchị? Nkwado akụrụngwa na-atụ aro
N'ihe banyere ịma ụlọikwuu, nrụgide niile na-agbakọ! Ya mere, ihe ndị a chọrọ maka maa ụlọikwuu? Kedu otu ọ ga-esi zụta akụrụngwa ịma ụlọikwuu, ebee ka ọ ga-azụta ya yana ndị ọ ga-ewere n'ọnọdụ dị a ?aa? Anyị edeghị ọkwa a na-enweghị ịma ụlọikwuu! Echegbula, anyị ga-agwa gị ihe niile mana ihe niile… Ka anyị bido ozugbo ahụ.
Uru nke ogige ahụ
Ndụ ndụ ike
Iwepu ike ojoo
Nweta obi ike onwe gị
Chọpụta onwe gị
Nwere onwe ya
Ọbụna ndị na-enweghị mmasị ime njem enweghị ike ịda mbà ọzọ mgbe ha nwesịrị ogige ahụ. N'ezie, n'adịghị ka atụrụ anya, ọ bụ ụdị ezumike anaghị adị egwu. Ọ dị ezigbo mma ka ị maa ụlọikwuu na Turkey. N'ihi na ndị mmadụ na-eme ebe a mara ụlọikwuu bụ ndị chọrọ ịhapụ nrụgide dị ka anyị. Ha bụ ndị mmadụ nke okike ma meghee ihe ọhụrụ.
Ma ọ bụrụ na anyị agbakwunye ile ọbịa, imekọ ihe ọnụ, na nchebe nke ọdịnala ndị Turkey, ọ gaghị emeri uto ya. Go gaa n’oké osimiri ma lee ụlọikwuu onye agbata obi gị. Returnlaghachi, ha akwadebe kọfị. Na mgbede, a na-emekọ nkwekọrịta ọnụ, a kwadebe nri ọnụ. Maa ụlọikwuu bụ ebe ị ga-eso. Ọ dị iche… Ihe agaghị agabiga na-ekwughị banyere ya bụ oge ya. Oge ọkọchị, udu mmiri na udu mmiri dị iche.
Enwere okwu anyị na-atụ ụjọ na ọ ga-enye gị nsogbu. Enwere ihe ndị dị mkpa dịka oge ahụ si dị. Offọdụ n'ime ihe ndị a kwesịrị ịbụ ezigbo mma. N'ikwekọ na nyocha anyị na ahụmịhe anyị, anyị ga-achọ ịsị ihe ndị a;
Oge ezumike oge ezumike na-enye ndepụta nyocha
Ohiri isi maa ụlọikwuu
Tebụl enwere ike ịgbanwe
Ihe enyemaka mbụ na nlekọta nlekọta
Maa ụlọikwuu stovu
Maa ụlọikwuu cookware
Maa ụlọikwuu teapot
Uwe mmiri / Bikini
Ntụnye uche maka ihe ndị dị mkpa maka ogige oge ọkọchị
Arpenaz Ọhụrụ & Black tent
(2.6 N'arọ) Decathlon
Anyanwụ a na ụlọikwuu na-enweghị mmiri bụ ihe kachasị mma ị nwere ike ịchọta maka ụbọchị ọkọchị na-ekpo ọkụ! Maka nnukwu ụlọ ntu ọhụrụ & Black Pịa ebe a.
(Efu 480 Gr, Ike 20 L) Decathlon
Akpa a gwara mmanụ, nke mere nnukwu ọdịiche mgbe ọnwụnwa anyị gasịrị, ga-abara gị uru nke ukwuu.
Ọ bụrụ na ịnweghị ụgbọala gaa n'ogige ahụ, ejula akpa gị nri na ihe ọ drinkụ yourụ. Kama, inwere ike idebe ihe ndi ozo ozo were jiri ya dika akpa. Mgbe ịtinyechara ihe ndị ahụ n'ụlọikwuu gị, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya iji nweta nri na ihe ọ drinksụ drinksụ site na ebe ị na-aga.
N'ezie ọ dabere na ebe ịga na otu ị si aga. Mkpebi bụ nke gị!
(Efu 1.7 Kg, Ike 71 L) Decathlon
Ebe ọ bụ na akpa a bụ lita 71, n'ezie, ị gaghị etinye lita 71 nke ya. Ikpokọta ihe niile dị arọ n'otu akpa bụ nnukwu ndudue maka ahụ ike. Ebumnuche anyị na-ahụ ebe a bụ iburu ihe ogologo gị dịka ụlọikwuu gị n'azụ. Akpa a, nke doro anya na nọmba 10 na nkwado lumbar, nwere nguzogide ujo. Enwere ọtụtụ akpa ị ga-achọ. ? Obi dị anyị ezigbo ụtọ!
(210 Gr) Mbipụta
Ọ bụ ihe kachasị dị na mbadamba. Ọ bụ ezie na akwadoghị ya maka nkasi obi, ọ dị mfe ma baa uru. Mbepu site na oyi na ala. Ọ na-egbochi imikpu. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ezumike dị jụụ, gụkwuo. Ọ dakọtara na tent.
Akpaka inflatable ute
(1.1 N'arọ) Decathlon
Ute a, nke na-adị nkasi obi karịa nke dịkwa nfe, na-aza onwe ya. Ikwesiri inye ume ikpeazụ maka ọzịza zuru ezu. Mana ị gaghị ebu ngwá ọrụ dịka mgbapụta. Ọ bụ ute na-egosi ogologo oge. Ọ dakọtara na tent.
(2.8 N'arọ) Decathlon
Enweghị m ike ime na-enweghị nkasi obi, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, m na-ebu ya n'azụ m, mana maka ndị na-asị na m chọrọ ịrahụ ụra otu ahụ! Nke a bụ ihe eji ama ụlọikwuu anyị ji. Iji mee ka ịdị arọ nke nke a n'akpa anyị hara nhata, anyị anaghị ewere ọtụtụ n'ime ihe ndị na-adịghị mkpa. Anyị zụtara akwa a maka mmadụ 2. Ma ugbu a, ọ bụ naanị otu onye ka o nwere. Nke a bụ nkwanye anyị. I nwekwara ike chọọ akwa ndị ọzọ ma ọ bụrụ na-ịchọrọ. Ọ gafere ule ntachi obi. Nwere ike ịlele ndakọrịta nke gị tent. Maka akwa akwa Pịa ebe a.
Anyị zụtara mgbapụta a na-enwu ọkụ site na Decathlon. Ugbu a adịghị na saịtị ha. Anyị agaghị achọ ịtụ aro saịtị dị iche, naanị ka a ghara ịkwụ ụgwọ ụgwọ mbupu iche iche.
Nlereanya nke mgbapụta anyị na-akwado: Air Hammer 12 ″ / 30cm lationgba Ọdụ Bestway
Foldable picnic ute
(650 Gr) Mbipụta
Ọ bụrụ na ịnweghị ike iburu ibu nke oche ahụ, ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ na-ewute gị, na n'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọdụ ala, nke a bụ ihe mkpuchi kachasị mma, mana kacha mma! Unyi anaghị ekpokọta unyi, ọ bụ mmiri na-adịghị, ọ na-apịaji ma na-adị obere. Ọ agafeela ule nkwụsị nke na-eyi uwe.
Mgbe m na-anya nkịta anyị, m na-edina ya n'okpuru ụgbọ ala. Ihe kpatara ya bụ na ọ dịghị mgbe ọ bụla na-enweta ihe nju ma ọ bụ ájá na ya. N'otu oge, ọ na-ele shake.
Tebụl enwere ike ịgba ogige
(1.6 N'arọ) Decathlon
Tebụl a, ebe ị nwere ike ịzụta ndị buru ibu, na-eme ka ndị mmadụ maa ụlọikwuu ma were pikiniki naanị maka ụtọ ya. Tebụl a na-adịgide adịgide na-aghọ nha nke akpa laptọọpụ mgbe apịaji. Ọ na-agbakwunye gị ụtọ. Nwere ike ịchọta ọnụahịa na ozi zuru ezu nke okpokoro akwadoro site na ihe oyiyi na gallery.
Maka obere tebụl Pịa ebe a.
Maka tebụl maka mmadụ 2/4 Pịa ebe a.
Maka tebụl maka mmadụ 4/6 Pịa ebe a.
Foldable maa ụlọikwuu stool
(1 N'arọ) Decathlon
Oche a, nke na-adịchaghị mma mana ọ nwere ezigbo ego yana ibu, nwere ike baara gị uru.
Nwere ike ịlele oche na oche ebe a, pịa ebe a.
Foldable maa ụlọikwuu oche
Oche a na onye na - ejide ihe ọ cupụ cupụ nwere ezigbo ọnụ ahịa ma e jiri ya tụnyere ọnụ ahịa ndị ọzọ niile. Nke siri ike ma dị mma.
Akpụkpọ ụkwụ na-agba agba / Akpụkpọ ụkwụ egwuregwu
(180 Gr) Mbipụta
Ọ bụ akpụkpọ ụkwụ anyị zụtara mgbe ọ bụ ngwaahịa arụmọrụ. Anyị ka na-eji ya. Its ga-eju anya site na mgbanwe ya na nkasi obi ya. Na ngwaahịa a sọks egwuregwuAnyị chere na ha abụọ bụ ndị otu zuru oke ọnụ. O nweghi mgbe atingsụsọ gbara, ma ọ bụ mee ihe na-esi ísì ebe ọ bụ na anaghị enwe ọsụsọ.
Nanị azụghachi bụ na ọ nwere ike iru unyi ozugbo. Mana ọ na-apụ mgbe a sachara ma ọ bụ jiri mkpocha akpụkpọ ụkwụ hichaa ya.
Inox igwe anaghị agba igbe
Na-aga ebe ikuku dị ukwuu? Ọ bụ igbe na-egbochi ifufe ma ọ bara uru maka ala (unyi ahụ anaghị adịgide na ala). Ibe otu, ọ dabara na obere akpa nke gbakọtara wee zighachi ya na ngwaahịa a.
Obere ite pan + Ilgaz na-esi nri
Efere, nke dị mma maka nri mmadụ abụọ, gụnyere setinter ma tinye n'ime mkpuchi nke ngwaahịa a. Ọ na-ewe obere ohere ma ọ dịghị arọ. Aka ya dị ike ma na-eguzogide ọkụ. Enwere ike ịsacha ya na asacha efere.
Ọkụ ọkụ na setịpụrụ a pụrụ iche; windproof na onwe-Mkpa ọkụ. Katrij na set bụ 230 grams. Mgbe ịchọrọ ịzụta katrij ọhụrụ Ebe a Pịa ebe a. Maka maa ụlọikwuu na-esi nri Pịa ebe a.
N'ezie, ị nwere ike ịchọta ụdị tii a na ọnụahịa dị ọnụ ala karịa na bazaa. Mana anyị na-akwado nke a ma ọ bụrụ na ị na-ekwu mgbe niile na ịntanetị. Tii dị n'ogige ahụ, a dịghị atụle mkpa ọ dị, ka emechara. Nwere ike ịchọta ọnụahịa na ihe ọmụma zuru ezu nke ngwaahịa ahụ site na ihe oyiyi na gallery.
Ka anyị na-abịa na njedebe nke okwu anyị, anyị ga-achọ ịgwa gị nke a. Bibie ihe ebu! Naanị na ị na-ama ụlọikwuu, ị gaghị erubere iwu ị mara ụlọikwuu. Yabụ na ị naghị ama ụlọikwuu n'ihi na ị were akwa mgbochi. Echegbula onwe gị banyere ihe onye ọ bụla kwuru. Ọ bụrụ na ihe dị mkpa bụ ịnweta ezigbo nzaghachi site na ọrụ gị, kpochapụ ihe ị na-eme!